Thread for Outdoor Zvigadzirwa
Kunze kwenzvimbo kunochinja, uye zviitiko zvekunze zvakakosha chikamu muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Nekudaro, zvimwe zvigadzirwa zvekunze zvinodiwa zuva nezuva.
MH tambo nematanho akasarudzika akakwana kune zvigadzirwa zvekunze, senge mukwende, mbatya, ngowani, shangu dzemitambo, matende emisasa zvichingodaro. Aya marapirwo akasarudzika anogadziriswa mushure mekubatana, saka marapiro acho akakodzera svutugadzike fiber, filament, yepakati yakarukwa uye chero imwe tambo.
Feature: Inokuvadza ultraviolet radiation inoita kuti tambo ipere ne redox reaction. Anti-UV tambo dzinogona kudzikisa kutora kwemwaranzi yeultraviolet, ichidzosera kudzikisira uye kukwegura kwetambo.
Application: Inokodzera zvipfeko zvekuchengetedza zuva, ngowani, swimsuits, shorts yegungwa zvichingodaro.
Feature: Phenolic yellowing, iyo inonziwo isinganzwisisi yero, ndiko kushanduka kweshinda uye machira. Nekuda kwemakemikari uye zvakatipoteredza zvinhu uye kuchembera kweshinda, "yellow" yezvigadzirwa zvichena zvinowanzoitika. Iyo dhigirii ye phenolic yellowing ine chekuita nehunyoro kwezvakatipoteredza, tembiricha, maokisijeni enitrogen. MH tambo dzakaedzwa kusvika ku4-5 giredhi nemunhu wechitatu uye inotenderwa zvizere neHM.
Application: Inokodzera yakajeka-yakajeka, yakajeka-yakajeka zvigadzirwa zvekunze.
Thread ine Yakanaka Ruvara-Kurumidza
Feature: Uchishandisa high fastness dyestuff, zvigadzirwa zveMH zvinogona kuita zvisingasviki mhedzisiro pa 95 ° C tembiricha. Hunhu hweshinda hunosvika ISO-105-C06 chiyero.
Application: Inokodzera yakakwira-tembiricha kemikari machira kana zvigadzirwa zvinoda yakanyanya tembiricha sterilization.
Mvura isina mvura Polyester yekuSona Thread
Feature: MH kusasva mvura kusina tsvina ine magumo anogadziriswa emvura anovhara simba remasasa, nokudaro nekuvimbisa kuti hapana mvura inotorwa nemucheka. Apo kushandura kwakarurama kunoshandiswa kunoshandiswa, kutakura kwemvura kuburikidza nejinga retsono kunodzivirirwa.
Application: Inokodzera kusona mataraini edura, mota, ngarava, mafekitori, migodhi, mayadhi ekutakura zvinhu, zvitima, mabhizinesi, kufukidza zvinhu zvekurima zvemumba, nezvimwewo zvinoshandiswa zvakanyanya muzvipfeko, zvigadzirwa zvemauto, kushanya kwekunze, kushanya kwekunze nedzimwe nzvimbo.
Mvura Inonyungudika Thread Warn
Kutya: 40 ° C
Feature: Rwonzi rwunonyungudika mvura runonyungudika kana rwanyudzwa kana kumwayiwa nemvura inodziya.
Izvi zvinobatsira kuchengetedza jira kubva kukuvara kunokonzerwa nekubvisa masisitimendi enguva pfupi.
Shinda yakasungika nemvura yakashandiswa mukushandisa kwakawanda, kusanganisira kuruka, machira, machira asina kurukwa, zvekushandisa zvinoraswa, zvipfeko zvemukati nematauro.
Zvigadzirwa zvedu zvinosanganisira mhando dzakasiyana dzeshinda, seshinda yakarukwa yepolyester yekusonesa, corespun polyester shinda yekusonesa, eco-friendly recycled polyester yekusonesa, isina mvura yekusonesa, anti-UV yekusonesa shinda, donje rekusonesa shinda, naironi yakasungwa shinda, embroidery thread, polyester textured warn, simbi yesimbi, hove twine, nezvimwewo inowanikwa muhukuru hwakasiyana uye tsanangudzo yekusangana nezvose zvinodiwa nevatengi.
Aramid Fibers Kusona Thread
Feature: Meta-aramid inonhuhwirira polyamide fiber.
Aramid fibers kirasi yekupisa-kusasimba uye yakasimba synthetic tambo. Aramid fibers inogovana mamwe maitiro akasarudzika anosiyanisa kubva kune mamwe ekugadzira mafiira, anosanganisira yakakwira simba, yakanaka kupokana neabrasion, yakanaka kurwisa kune organic solvents, magetsi kuputira, hapana nzvimbo inonyungudika, yakaderera kupisa, yakanaka machira kuvimbika kumatunhu akakwirira. Aya maitiro akasarudzika anobva kuamamid fibers 'mamorekuru mamiriro.
Application: Meta-aramid inouya mumhando mbiri dzakasiyana: dzakarukwa kazhinji inoshandiswa mukusona mafomu ezvipfeko, uye firita inoenderera iyo ine simba rakakwirira uye yakakwana kune izvo zvigadzirwa zvinoda kuita kukuru kwekusimbisa uye simba.
Kufungisisa Polyester Thread yekuSona
Application: Polyester reflective Kusona tsvimbo inonyanya kushandiswa kuruka nemucheka kushongedza zvipfeko zvemitambo, mabhegi, shangu, magurovhosi, nezvimwe.
Inoshandiswa kugadzira hembe, tambo dzebhutsu, cross-stitch, crochet, embroidery, kurukwa nemaoko, kusona nezvimwe.